6 Best Banks Banking for Opening Accounts - Aro na Atụmatụ
Obodo kachasị mma na 6 mepee Akaụntụ Banki
Ndị mmadụ ga-enye ndụmọdụ dị iche iche dị iche iche mgbe ọ bịara akụkọ kachasị mma n'èzí. Nke a abụghị n'ihi na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-ezighị ezi - enwere ọtụtụ nhọrọ n'ebe ahụ. Obodo ego ego zuru oke maka otu onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị mma maka onye ọzọ.
Otú ọ dị, e nwere mba ụfọdụ ndị na-achụ ego n'èzí na-ekwurịta okwu. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ụfọdụ kacha mma mbupụ ala mba - na ihe ha kacha mma.
Obodo kachasị mma maka ụtụ isi - Cayman Islands
Agwaetiti Cayman nwere aha obodo di omimi, na-enye ndi ahia ihe nile aka ha zuru oke. Agwaetiti bụkwa ebe a na-atụ ụtụ. Nke a bụ okwu nke Investopedia kọwara dị ka obodo nke na-enye ndị bịara abịa na ndị ọchụnta ego ụgwọ obere ụtụ isi. Ọzọkwa, o nwere gburugburu ebe obibi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba, nke bụ ihe a chọrọ n'aka ọtụtụ ndị.
Enweghi ụtụ isi kpọmkwem mere ka Cayman Islands bụrụ ebe na-emepe emepe nke akụ na ụsọ oké osimiri, Cayman.com na-ekwu. Enweghị ụtụ isi maka uru ego, ụlọ ọrụ, njide, ihe onwunwe, ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ ego. Tụkwasị na nke a, enweghị ngbanwe mgbanwe, na-enyefe ego na-enyefe ma banye n'àgwàetiti niile n'ego ọ bụla. Enweghi ihe ndi ozo choro.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ụtụ isi n'ụwa. Yabụ, ndị Caymans emeela ọtụtụ ihe iji nweta ezigbo aha ha dị ka ezigbo ebe maka ịpụ akụ na ọdụ ụgbọ mmiri. A nabatara ha dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ ego mba ụwa 10 kachasị elu n'ụwa. Ọzọkwa, iwu mkpuchi ụlọ akụ Cayman Islands na-agụnye ntinye okwu nzuzo maka ndị ahịa ha. Agwaetiti ndị ahụ amalitela usoro iwu siri ike maka ọrụ maka ichekwa ego na ọdụ ụgbọ mmiri ha. Na mgbakwunye, ha na asọmpi n'ahịa mkpụrụ ego Euro.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na, ọ bụ ezie na ndị Caymans na-enye ụtụ ụtụ isi; ọtụtụ mba, dịka US na UK, na-akwụ ndị amaala ha na ndị bi na ụwa ụgwọ.
Obodo kachasị mma maka akụnụba - Singapore
Have nwere $ 200,000 ma ọ bụ karịa nke ịchọrọ iwepu na akaụntụ ịpụ ahịa? Singapore nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma. Usoro akaụntụ na-abụkarị nfe. N'ọtụtụ oge, ịnwere ike ịtọ akaụntụ na-enweghị njem ọ bụla gaa Singapore, Sing Sav kọwara.
Otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ Singapore bụ maka aha ọma ya dị ka ebe kwụsiri ike, ebe nchekwa iji chekwaa akụ. Obodo a nwere iwu siri ike na ngalaba ụlọ akụ ha. Nke a putara na echedoro ezigbo akụ gi. Ebe nkwakọba akụ ha nwekwara teknụzụ dị nkọ. Nke a na - enye ohere maka nchekwa yana ị nweta akụnụba gị ngwa ngwa.
Singapore na-enye ọtụtụ ọrụ nlekọta akụ na ụba, ego, ụlọ mmebi ụlọ na akaụntụ iji jikwaa ego gị. Enwekwara otutu uzo ahia ahia ahia iji ghaa uru na ahia di na Singapore. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ị ga-enwe ụzọ US, Hong Kong, China, Europe, na ndị ọzọ. Akaụntụ dị n'ọtụtụ ego, na -ebelata nsogbu nke ọnụego mgbanwe dị elu. Kslọ akụ dị na Singapore nwekwara ndị na-ahụ maka njikwa akụ na ụba. Ndị ọrụ ndị a raara onwe ha nye enyere gị aka ịchọta atụmatụ ego kachasị mma maka ego gị.
Obodo kachasị mma maka Nchebe Akụrụngwa - Switzerland
Ọ dịwo anya a mara aha Switzerland dịka otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mma iji zoo ego. Otu n'ime isi ihe kpatara nke a bụ iwu nzuzo nke obodo. Ha na-agbaso ihe gbasara 300 afọ, Olee otú ọrụ si arụ ọrụ. Iwu Switzerland na-amachibido ndị na-akụ ego ka ha ghara igosipụta ozi ọ bụla banyere akaụntụ gị n'ekweghị nkwenye gị. Ndị na-akwụ ụgwọ na-emebi iwu a nwere ike ihu ruo ọnwa isii n'ụlọ mkpọrọ. Ọzọkwa, ndị ọchịchị nwere ike ịba ha mma na francs franc 50,000. Nanị otu n'ime iwu nzuzo a bụ maka ikpe mpụ. Ọzọ enwere otu akụkọ otu afọ na-akọrọ ndị isi mba ụtụ isi iji zere iwepụ ụtụ isi.
Atụmatụ nchebe kacha mma kachasị ewepụ akụ gị site na obodo gị; na ndị ikpe ya. Iji mee nke ahụ, ọ dị mkpa ijide akaụntụ gị na ụzụ ma ọ bụ ntụkwasị obi dịpụrụ adịpụ. Iwu nzuzo na Switzerland tinyere iwu nchedo akụ na ụba Cook Islands ma ọ bụ Nevis mere ka o kwe omume.
Ihe ọzọ mere e ji mara Switzerland dị ka ụlọ akụ maka nchedo ego bụ nchebe ya dị ka ego dị ize ndụ. Ọnọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke Switzerland nọgidere na-adịgide adịgide. Ndị Switzerland Bankers Association (SBA) na-achịkwa akụ. Iwu ndị Switzerland enweghị ụtụ isi na mmasị, nkwekọrịta ma ọ bụ ihe nketa, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ Switzerland anaghị enweta uru ahụ. Iwu Switzerland na-achọkwa nnukwu ego isi obodo. N'ihe banyere 2004, SBA gbanwere Nkwekọrịta Nchedo Onye Nkwado. Nkwekọrịta a na-eme ka o doo anya na ọ bụrụ na akụ akụ akụdaghị, ndị na-edebe ego ga-enweta nkwenye ha nwere ikike iwu kwadoro.
Obodo kachasị mma maka ụlọ ọrụ - Nevis
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwaga ụlọ ọrụ gị n'èzí, Nevis bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma. Nke ahụ bụ ebe anyị na-etolite banyere 70% nke ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ ihe anyị na-emetụta. Ihe na-eme ọtụtụ ndị n'àgwàetiti ahụ bụ ihe nchebe ha, ihe dị ala na ụkpụrụ dị elu. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka Nevis LLC, n'ihi ikike nchebe ya dị ike. Ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ntanetị nwere mgbanwe arụmọrụ na njikwa na nchịkwa iwu ole na ole. Enweghị ụtụ isi ma ọ bụ iwu ndị ọzọ na Ụlọ Ọrụ Ọrụ Nchịkwa na-akwado ụkpụrụ dị elu.
Ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ntanetị nwere nnukwu uru maka ndị nwe ụlọ ọrụ na ndị na-eketa òkè / ndị otu ụlọ ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkwaga ma ọ bụ site na mpaghara ndị ọzọ, yana ịkwado ma ọ bụ jikọta ya na ndị ọzọ Nevis ma ọ bụ ndị mba ọzọ. Enweghị iwu chọrọ ka ụlọ ọrụ ndị Naijiria nwee isi ego. Ọzọkwa, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ nwere ike ịkọ ọkwa. Ndị nwere oke nwere ndokwa nchebe ma nwee ike ịpụ na ụlọ ọrụ na ọnụ ahịa dị mma. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ Nevis nwere ike depụta òkè ha n'ahịa ahịa n'ụwa nile. Nke a gụnyere NASDAQ, Exchange Stock Exchange, International Exchange Securities, na ndị ọzọ.
BVI bụ onye mmeri mbụ na ụdị a. Ma na iwu ndị dị oke ike, ike-na - ga-arụpụta nke ọma otu nnukwu "Nwee Akwụsị" akara maka ikike. Olileanya na ha ga-ebili ma tụọ anya na e nwere nhọrọ ndị ọzọ n'ụwa. Ikekwe ochichi ahụ ga-eji dochie ndị na-achịkwa ugbu a na ndị na-emechi ahịa ahịa. Ekem, ekeme ndidi mm o ekeme ndifiak enye.
Obodo kachasị mma maka ndị na - achọpụta mmasị - Belize
Ọ bụrụ na ịchọọ maka ọnụọgụ akụ ego kachasị mma, ọ ga-abụ na Belize agaghị anọ na ndepụta ahụ. Kama nke ahụ, ọchụchọ gị nwere ike igosi mba ndị dị ka Ukraine, nke na-ebuli elu ọnụego 20%. Ụda dị mma, nri? Ọ bụ, ruo mgbe ị tụlere ihe dị ka onu oriri na nchekwa ụlọ akụ. Ntuba na Ukraine bụ 49%. Nke ahụ bụ ihe dị iche nke 29% nke na - enye ya ezigbo ego ọnụahịa dị mma, site na Go Banking Rates. Ukraine nwere nsogbu abụọ bụ isi: ọ bụ ego maka ịkwụsị ego na ego ego Ukraine na-arịwanye elu. Nke a pụtara na ego gị adịghị echebe onwe ya, ị gaghị ahụkwa na 20 dị mma% laghachi na ego.
Ya mere gịnị kpatara Belize? Dịka ede ederede a, Belize nwere ezigbo ọmụrụ nwa dịka 2.54%. O nwere onu ogugu onu ahia nke dika 0%, dika nke etiti 2019 kwa Trading Economics. Nke ahụ dị ntakịrị karịa mba ndị ọzọ akpọtụrụ n'isiokwu a, na mgbakwunye na US na Canada. Agbanyeghị na nke ahụ abụghị 20%, Belize bụkwa mba kwụsiri ike nke nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ. Lan Sluder kọwara na akaụntụ Belizean mba ụwa adịghị n'okpuru ụtụ isi obodo ma ọ bụ mgbochi mmachi iji gbanwee. Ndị na-ejide akaụntụ nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ nnukwu ego, ọnụego mgbanwe n'etiti Belize na US bụ 2: 1. A makwaara mba a maka ịkwado nzuzo nke ndị ahịa ha. Ọzọkwa, ụlọ akụ mba ụwa Belizean na-ejidere ndị ahịa ha nke mba ọzọ - ọ dịghị ndị ahịa mpaghara kwere ka ha.
Obodo kacha mma maka Nchebe - Germany
N'ime ndepụta akụ nchekwa kacha ọhụrụ nke Global Finance, otu n'ime ụlọ akụ ndị Germany na-ewere ọnọdụ nke mbụ. Germany jidere oghere atọ ndị ọzọ na iri kachasị, maka mkpokọta isii na listi 50. ịkwụ ụgwọ, nke ụlọ ọrụ German, na-ekerịta nnukwu ihe kpatara n'azụ German ịbụ isi iyi maka ụlọ akụ ndị dị n'akụkụ nchebe nke ụwa. Ha na-ekwu na ọ bụ nkwụsi ike nke obodo; tumadi na aku na uba. Ọ bụ ebe a ma ama maka ịchekwa ego, ịlele, na akaụntụ njide.
Ebe ọ bụ na Germany bụ mba nke oge a na nke mepere emepe, ndị na-ahụ maka akaụntụ ga-enwe ike ịnweta ọrụ ntanetị na nke ATM, 24 / 7. N'ọtụtụ ọnọdụ, ịkwesighi ịdị njikere ịmepe akaụntụ na Germany. Tụkwasị na nke ahụ, ụgwọ mmeghe na mmezi na-abụkarị ala. Ụfọdụ ụlọ akụ na-enyekwa nhọrọ nke inweta Visa ma ọ bụ MasterCard kaadị akwụmụgwọ. Uru bara uru ọbụna karị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem. Nke ahụ bụ, dịka inweta akaụntụ na Euro nwere ike ịba uru na Europe dum. Ọzọkwa, ụfọdụ ụlọ akụ nwere ihe ndị ọzọ maka ndị njem oge.
Ọ bụghị ebe dị mma ma ọ bụrụ na ịnwee iwu na-esochi gị, agbanyeghị. Germany na-achịkwa mkpebi nke ndị mba ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na nchekwa akụ bụ ebumnuche gị, gaa ebe ọzọ.
Ntuziaka Bank Bank kachasị mma maka imepe akaụntụ
Imepe akaụntụ na nke ọ bụla n'ime mba ndị a ga-adị iche na ihe isi ike na mmefu site na obodo na akụ. You're dịla njikere ịme nzọụkwụ na-emeghe ma na-emeghe akaụntụ akụ nke mba gị ma ọ bụ nweta ozi ndị ọzọ? Enwela onwe gị ịgakwuru otu ndị ọkachamara banyere ego anyị. Ha nwere ike ijide n'aka na ị na-enweta ọtụtụ ihe na akaụntụ gị. Na mgbakwunye, ndị ọrụ anyị nwere ike ịrụ ọrụ na onye na-edekọ ego gị iji jide n'aka na ị na-agbaso iwu ụtụ isi kwesịrị ekwesị.
Investopedia na-enye ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị ga-eburu n’uche mgbe ị na-emepe akaụntụ na-apụ apụ. Ihe ndị a chọrọ ga-adị ka imepe akaụntụ n'ime obodo gị. A ga-ajụ gị maka ozi gbasara gị dị ka aha gị, ụbọchị gị, ọmụmụ gị, adreesị gị, amaala gị, na ebe ị na-arụ. Ọbụna mba ndị nwere iwu nzuzo nzuzo siri ike ga-ajụ nke a. Nke a bụ n'ihi na ọ dị mkpa mgbe ịtọlite ​​akaụntụ gị ka ụlọ akụ nwee ike ịchọpụta njirimara gị.
Documentsfọdụ akwụkwọ ị nwere ike ịchọ maka akaụntụ gị gụnyere ihe ndị a. Eleghị anya ha ga-arịọ nnata akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị na / ma ọ bụ paspọtụ na akaebe nke adre. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-ajụ maka akwụkwọ nyocha ego site na ụlọ akụ gị ugbu a. Ha nwere ike jụọ maka ụdị azụmahịa a na-atụ anya ịgafe na akaụntụ ahụ. Na mgbakwunye, ha kwesiri ịchọpụta njirimara gị. Iwu ndị a bụ iwu mgbochi ịkwụ ego. Ndị ụlọ akụ chọrọ ijide n'aka na mmadụ anaghị eji ọrụ ha arụ ọrụ iwu akwadoghị.
Mmechi - Ịchọta Bank Kwesịrị Ekwesị
Dịka ị siri hụ, enweghị otu-nha dabara-niile. Enwere ọtụtụ nhọrọ ma a bịa n’ịhọrọ mba ebe imepe ụlọ akụ na-ebugharị n’okpuru. Mba niile akọwapụtara n'elu nwere uru karịrị ihe ha kacha “mma.” Payfọdụ na-akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa dị elu karịa ụlọ akụ. Choputa obodo nke di nma gi. Iji mee nke a, ị nwere ike ịchọ enyemaka nke otu ndị ọkachamara na - ahụ maka ego. Biko jiri mpempe ase ma ọ bụ akara ekwentị na ibe a. Can nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji otu n'ime ụzọ ndị a. Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite na akaụntụ akụ dị n'okirikiri kachasị mma maka gị.
Mgbe a bịara na nchekwa nke foto akụ na ụba gị yana ịhazi nchekwa gị, buru n'uche ndụmọdụ ndị a. Na mgbakwunye, ịchọrọ naanị ụlọ ọrụ ego nchebe kachasị mma na ụwa. Dabere na ikike ị na-ahọrọ, nzukọ a nwere mmekọrịta na ụlọ akụ ndị dịpụrụ adịpụ nke na-enye ike kachasị na nkwụsi ike na nchekwa.
Banlọ akụ ma ọ bụ ụlọ akụ dị n'akụkụ mmiri na-ezo aka n'ọtụtụ ụlọ akụ na-etinye ego na itinye ego. Ha dị na mba na obodo ndị ọzọ na-abụghị obodo nkwụnye ego. Teknụzụ mmadụ nwere ike ịtụle ụlọ akụ mmiri ọ bụla mgbe ọ zutere ụkpụrụ a dị n'elu. Ọzọkwa, ndị ọkachamara na-edobe oge niile maka ụlọ ọrụ ụlọ akụ ebe ha nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka nzuzo onye nkwụnye ego.
Kemgbe ha malitere, Offshore Banks, usoro mgbasa ozi na ikike ụlọ na-egosipụta n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ebubo ndị ahụ ewepụtara site na ịchụ ego ụtụ isi ruo n'ịkwado ego. Mana kpachara anya nyochaa ezigbo ebumnuche nke Akaụntụ Banyere Oke. Mee ụfọdụ nnyocha na-adịghị mma iji nyochaa ebe a na-ejide ego na-ezighi ezi ma ọ bụ "kpọnwụrụ." Nke a ga-eme ka a ghọtakwuo ọnọdụ ahụ. Ebubo ụgha ndị ọzọ dabere na nkatọ maka gburugburu nchekwa, iwu na-adịghị mma, wdg.
Ọzọkwa, ndị a enweghị ike ịgafe n'eziokwu ahụ. Otutu ikike Banyere Oke Banyere Oke Banyere Banyere Banyere Mbara Anya Nke Nwere Ulo Egwu Nke a bụ n'ihi na ọ bụ maka ọdịmma ha kacha mma ịdọrọ na idobe ndị na-edebe ego. Ndị ọchịchị na-achịkwa iwu ndị a maka igbo mkpa nke onye na-edebe ego. Ọtụtụ n'ime ikike ndị a na-adabere na isi obodo ndị mba ọzọ nwere n'ụlọ akụ ha dịka isi ọnọdụ akụ na ụba ha. Na mgbakwunye, ụlọ akụ ndị a na-abụkarị isi mmalite nke itinye ego na mba ọzọ.
Nkọwa sara mbara nke ụlọ akụ dịpụrụ adịpụ bụ ụlọ akụ dị na ikike ma ọ bụ obodo dị iche na ikike ma ọ bụ obodo nke onye na-edebe ego ma ọ bụ onye na-etinye ego bi. Otu n'ime ọtụtụ uru ị na-enwe na ntanetị ego Banyere bụ na ha na-anọkarị ebe ndị ụtụ isi. Na mgbakwunye, ha nwere iwu nke na-eweta oke nchekwa na ị nweta uru nzuzo maka onye na-etinye ego na ụlọ akụ. Iwu ndị a na-enyekwa ohere maka izu ike nke mmachi gbasara ụdị ndekọ ego ụlọ akụ. Enwere ụkpụrụ nke na-enye ndị na-edebe ego ma ọ bụ ndị na-etinye ego ohere ịkpa oke. N'ihi ya, ndị na-achịkwa na-ekwupụta otú ụlọ akụ ahụ si ejikwa ma na-emefu ego maka nchekwa nchekwa kacha. N'ozuzu ha, ndi nlere ahu choro inye ndi nile achoro ha uzo di iche-iche na anoghi ego na itinye ego ha. Nke a pụtara iwu nwedoro ndị na-edebe ihe.
Mpaghara ikike ndị dị n'ụsọ mmiri na-ewu ewu na-ewetakarị ụtụ dị ukwuu maka ụgwọ ụtụ isi. Ọ bụ ezie na ndị nọ na mba ụfọdụ, dịka nke US na-atụ ndị obodo ya ụtụ na ego ha zuru ụwa ọnụ. Maka ebumnuche anyị ebe a, anyị ga-elekwasị anya naanị na ndị ahụ gosipụtara iji nye uru a na-apụghị ịkọwa akọwa dị ka akọwara n’elu. Bankslọ akụ ndị a dị n'akụkụ mmiri nwere ike ịdị na steeti ndị dị n'ezie dịka Caymans ma ọ bụ Channel Islands. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike ịnọ na mba ndị dịka ala Switzerland. Switzerland abụrụla ebe ụtụ isi dị ihe karịrị otu narị afọ - yana ogologo oge karịa mba ndị agwaetiti ahụ.
Ndị ụlọ akụ Switzerland
Enweela ọtụtụ mkparịta ụka banyere nzuzo nke ụlọ akụ Switzerland. 'Ll ga-achọpụta, na-agbanyeghị, Naanị ụlọ akụ Switzerland nwere nsogbu bụ ndị ụlọ akụ ndị ahụ nwere alaka ndị dị na mpụga Switzerland. Suisse Ebe E Si Nweta na UBS nwere ọnụnọ US dị ukwuu. Ya mere, ndị na-achịkwa US nwere ike ịnwe ụzọ ha na akụ ndị a. Ndị nwere naanị ọnọdụ Switzerland na-anọgide na-enwe nzuzo nzuzo.
Dịka ekwuru na paragraf mbido anyị, enwere ọtụtụ echiche na-ezighị ezi na akụkọ ifo metụtara akaụntụ akụ sitere na mpaghara mmiri. Ndi anoghi ugbo ala di na ugbo ebe ndi nche ndi ori na ndi omekome? Gụọ ngalaba akụkọ ifo gbasara banks na weebụsaịtị a maka ozi ndị ọzọ. N’edemede a, anyị nwere ozi ndị ọzọ gbasara akụkọ ifo ndị na-enye ọpụpụ nke ekwesịrị ịtụle.
Ebee ka ị mepee Akaụntụ Akaụntụ Gị?
Ọ dị mkpa na ịhọrọ ikike kwesịrị ekwesị mgbe ị na-ekpebi ikike ị ga-eji dị ka ikike iwu ụlọ akụ. Otutu ikike nke oke osimiri nwere uche, ezigbo iwu. Ha no ebe echebere idobe ego na ichekwa ihe nzuzo ha. Agbanyeghị, ụfọdụ na-atụle uru ha na ụtụ isi, ebe ndị ọzọ na nzuzo, na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ha niile na-enye ọnọdụ dị gburugburu nzuzo na nchebe, ọ nwere echiche iji kọwaa ihe mgbaru ọsọ ụlọ akụ. Mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ike otu a. Obere pere mpe nke mpaghara ndị mmiri nọ n'okirikiri na-arụ ọrụ na-adịghị mma nke ijikwa na nhazi usoro ha. Mana onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye ndụmọdụ gwara ya ga-ewere ndị a ka ihe adịghị mma maka onwe ha ma ọ bụ ndị ahịa ha. Ọzọkwa, ndị a na-achịkwaghị achịkwa na-achịkwa ikike ndị a na - ahazi nke ọma. N'ihi ya, ha na-egosipụta ụzọ dị mfe nke FATF (Financial Action Task Force) na-achọ ịkwa ego ma ọ bụ ime mpụ ndị ọzọ.
Nke a bụ isiokwu yiri ya na Cayman Islands Banks na onye ọzọ
Belize Banking. N'ebe a, ị ga-ahụkwu ozi gbasara ikike abụọ a ma ama.
Akụkọ banyere Akaụntụ Bank Banyere
Ọ bụ ihe na-adịghị mma na ndị Europe na-akwagide mgbe niile tax ibu arọ. Nke a bụ eziokwu na agwaetiti Britain dị ka ọ dị na kọntinent ahụ. Ndị Europe nwere atụmanya nke ikiri ihe akụ na ụba ha tara ahụhụ na akụ na ụba belata. Aka niile ndị ọnaụtụ naara na-akpakọ akụ na ụba ha. Yabụ, kọntinenti ahụ gbachapụrụ agbachapụ.
Mgbe ahụ, ihe ngwọta bịara. Obere, agwaetiti obodo a maara dị ka Channel Islands wee nweta echiche. Ha kwenyere na ndị na-edebe ego ndị a iwere iwe na nkwụnye ego edobere na ya nwere ike ghara inyocha ya; n'ihi nke a, ibu ụtụ isi dị arọ. Uru ndị a mere ka ọtụtụ ndị Europe bara ọgaranya kwenye. N'oge na-adịghị anya, ọrụ a nwere ọganihu. Iwu ndị ọzọ pere mpe. Ha onwe ha kwa ghọrọ ndị na-azọ nchekwa nke magnetik mba ọzọ na-adọta ma ha wee malite imegharị ụlọ ọrụ ụlọ akụ ha. Ọtụtụ mba jisiri usoro iwu, usoro iwu ichekwa ego na nchekwa. Ya mere, ha belatara nchegbu nke ndị na-etinye ego na ndị na-edebe ego. Thelọ akụ nke sholọ Ahịa ahụ malitere mmalite!
N’oge na-adịghịkwa anya okwu ahụ “banlọ akụ dịpụrụ adịpụ” ghọrọ obere iwu, na-enweghị ikike. Ha nyere ụlọ akụ nchekwa, nchekwa, iwu nzuzo na ụkpụrụ bara uru. N'oge na-adịghị anya, akụkụ ndị ọzọ nke ụwa 'maara.' Ha malitere ile ebe ndị a anya dị ka ihe ngwọta dị mfe maka mkpa ha. Ndị America, ndị Africa, ndị Asia, wdg, hụrụ na ndekọ ego ndị a na-enyefeghị Oke Osimiri na-aba ezigbo uru maka ọtụtụ ihe. N'adịghị ka ụlọ akụ ha n'ụlọ, ndị a Oke Banyere Edeghị Edere oge niile ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ esemokwu akụ na ụba. Ọtụtụ ndị azụmaahịa gụrụ akwụkwọ maara ha maka nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba ha na uru nchebe nchekwa.
Banyere akụ na ụba na mgbasa ozi
N'afọ ndị sochirinụ, ha abawanyela n'ọrụ n'ụzọ dị ukwuu ma si otú a na-ahụ ụzọ. N’otu oge ahụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ekpughere akaụntụ ndekọ ego ndị mba ọzọ n’ụzọ na-adịghị mma. Na mgbakwunye, ikike ndị buru ibu na-agbagọ aha ha dị ka ihe na-eme ka omekome ahụ dị n'okpuru ala. Mba ndị a na-atụ ụtụ ego na akụ ndị buru ibu na-egosipụta ha dịka ezigbo ụlọ maka akụ ezighi ezi. Ha na-anwa ime ka o doo ha dika ebe ha choro izoputa ego.
Ndị na-etinye ego na ndị na-edebe ego maara ihe na mbụ na ajọ mbunobi enweghị ike isi na eziokwu ahụ pụta. Ha maara na ụlọ akụ ndị dịpụrụ adịpụ nwere ike ịba uru maka akụ; dịka ebe siri ike maka ego achọrọ nchekwa, nchekwa, nzuzo. Na mgbakwunye, ha maara na ụlọ akụ ndị a nwere ike ichekwa ego ha. Ya bụ, ha na-egbochi akụ nke nsogbu obodo, akụ na ụba, ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo ha. Taa, ụlọ akụ dị n'akụkụ mmiri na-aga n'ihu na-ejedebe ahia ha. Ha na-aga n'ihu na-enye ebe nchekwa dị nchebe, nke nzuzo. Ha na-enye nzaghachi maka ndị na-achọ ichebe ego site na nsogbu nke usoro iwu na ụtụ isi.
Ọtụtụ ndị na-edebe ego na-akpagbu ego eritela uru na gburugburu ebe nchekwa dị nchebe, nke nzuzo na nke ụcha. Nke ahụ bụ ihe akaụntụ ụlọ akụ na-enye iwu iji nye onyinye. Ọ dị mkpa ịtụle ebumnuche gị ma gị na onye ọrụ ruru eru ma nwee ahụmahụ kwurịị tupu ị banye n'ime mmiri a na-eteghị ete. Enwere ọtụtụ uru a na-edoghị anya na-eweta site na ịtọlite ​​akaụntụ akụ Oke. Utu aha ha n’etiti ndi na echere ego na ndi n’enwe ego maka ịnye ebe obibi ego bu ego nke gosiputara nchebe n’aka oru na ikwuputa nzuzo na-abawanye. Ọzọkwa, ụlọ akụ ga-eji ụgbọ mmiri ga-aga n'ihu na aha a na-enweta ego maka nchebe akụ, mbelata ụtụ (dabere na ikike gị), yana nkwuputa nzuzo dị egwu.
<Isi nke 6
Isi nke 8>